Sary hosodoko tsy mahazatra an'i Natalie Irish | Famoronana an-tserasera
Ilay mpanakanto monina any Houston Natalie Irish, mamorona sary hosodoko mahafinaritra miaraka amin'ny fitaovana tsy mahazatra indrindra, oroka. Mamorona sary tsy misy afa-tsy izy lokomena toy ny lokony ary ny molony toy ny borosiny. Ny fampiasany ny sary andavanandro novolavolainy izay mahatonga an'ity mpanakanto ity tadiavina fatratra, izay nanaovany dinidinika tsy tambo isaina. Avelanay eto ianao a Video an'ny artista.
Nambarany fa efa nanao zava-kanto hatramin'ny nahaterahany. Ka na dia marina aza izany, dia mampiseho fahaiza-manao ara-teknika amin'ny sehatra kanto isan-karazany izay tsy afaka hiarahana ny vehivavy Irlandey taona niainany. Hatramin'ny nahatongavany tany Irlandy dia tsy zazavavy izy, nanao sary toy ny nanambarany ny tenany, ny hoso-doko ary ny sary sokitra io no fitiavany, nandatsaka ny valanoranony ary nampalaza azy ho malaza. Izy dia lavitra lavitra amin'ny fanaovana sary refy iray amin'ny pensilihazo sy borosy, fanaovana sary sokitra amin'ny soavaly, sary hosodoko misy menaka, akrilika, ranomainty ary lokomena. Ilay Irlandey dia mpianatra amin'ny zava-drehetra ary mahay amin'ny lafiny kanto rehetra ezahany.
Ny sombiny mampanantena sy mahaliana indrindra dia ambonin'ny zava-drehetra sary misy lokomena sy dian-molotra. Manova ny habe sy ny tsindry ataon'ny molotra eo amin'ny lamba, Irlandy dia mamorona vokatra vita izay tsy mahafinaritra fotsiny, fa mahavariana amin'ny kanto. Naseho tamina bilaogy kanto maro izy, ary nandray tamim-pitiavana ireo mpankafy zavakanto maro eran-tany.
Tena vatosoa amin'ny tontolon'ny zavakanto izy, mpanakanto tena tsy fahita firy amin'izao fotoana izao. Tsy mandoka loko amin'ny lamba canvas izy, ary tsy mamorona ny sangan'asany amin'ny heviny filozofika lalina. Mampiasa ny vatany voajanahary fotsiny izy mba hamoronana taova voajanahary hafa amin'ny lamba, ary fahombiazana izany. Ny sary dia sary.
Fuente| Natalie Irish
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary hosodoko fanorohana tsy mahazatra an'i Natalie Irish